Nnwale onwe onye Covid-19 ihe nchoputa antigọn Sichuan Yinye Medical Technology Co Ltd.
Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd. dị na Global Center nke Chengdu, Sichuan Province, China. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-elekwasị anya na R&D, mmepụta na ọrịre nke in vitro nchoputa (IVD) n'ọhịa nke biomedicine. Ọ na-etinye aka n'ịmepụta usoro nhazi ụlọ ọrụ dum nke usoro nyocha nke amamịghe. Usoro ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na-ekpuchi ọtụtụ ngwaahịa inyocha vitro dị ka immunodiagnosis, nyocha mkpụrụ ndụ, na ule microbiological. Ọ nwere nchịkọta teknụzụ miri emi na uru ndị ọrụ pụrụ iche na ngalaba nyocha ọrịa kansa n'oge, nchọpụta ngwa ngwa nke ọrịa na-efe efe, yana nyocha ngwa ngwa nke ọrịa geriatric.
Ulo oru ahia nke ulo oru a bu ihe omimi nke in vitro di ka immunodiagnosis ...
Ihe Nchọpụta Antigen COVID-19 Maka Nchọcha Swab / Sputum Test Nnwale Onwe Onye)
Ihe Nchọpụta Antigen COVID-19 Maka Samlele Sputum
COVID-19 Ihe Nchọpụta Anti / Antigen
COVID-19 / Influenza A / Influenza B Nchọpụta Kit
● Nnukwu njikwa njikwa ma hụ na ọnụego ọrụ ọgwụ na-arụ karịa 95%.
Factory direct sell price, ọ dịghị onye nkesa akpata ego price dị iche.
Inye N'inwe ahụmahụ ruo afọ 20 maka ọgwụ ọgwụ, Yinye ejirila aka ya jeere ndị ahịa ihe karịrị mba iri atọ mba ụwa dum.
● Na 10 afọ quality akwụkwọ ikike iji hụ na-aga n'ihu imekọ ihe ọnụ.
● Karịa ndị ọrụ aka ọrụ 130 iji nye gị azịza zuru ezu nke ngwaahịa.
ANYI GA-EME GI
ỌR PR ỌZỌ
Yin Ye nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe ọkachamara ma tinye aka na mgbochi ọrịa.
Ndị Ọrụ Ndị Ọkachamara
Ndị ọrụ ọkachamara 130 + na-enye gị usoro zuru ezu nke ngwaahịa.
Advanced Professional Aha
Ulo oru ndi okacha amara na asambodo doctoral nwere ihe kariri 30% nke ndi otu ulo oru.
A na-ebupụ ngwaahịa na mba 30 na mpaghara, na-enyere aka mgbochi ọrịa na mpaghara.
Nke anyi Uru
New-Gene & Yinye nwere ụlọ atọ GMP dị ọcha maka imepụta nnwale mpụta nke na-eme ka ọkwa nrụpụta kachasị elu.
High Production ikike
Ugbu a, New-Gene & Yinye nwere ihe karịrị ndị ọrụ mmepụta oge 500, nke na-eweta ikike imepụta kwa ụbọchị nke 3,000,000 pcs
Usoro Mmepụta akpaaka
New-Gene & Yinye nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe abụọ na usoro isii na-arụ ọrụ akpaaka na-arụ ọrụ nke na-ebelata mmejọ mmadụ ma na-eme ka arụmọrụ dị elu
NEWGENE nweta nnwale nnwale nke onwe na Belgium na Sweden
COVID-19 Antigen Detection Kit nwetara nnwale nyocha onwe onye site na Ministry of Health Belgium (FAMHP) na thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Sweden (Swedish Medical Products Agency). NEWGENE bụ ụlọ ọrụ China mbụ nwetara nnwale nnwale onwe ha na mba Europe abụọ a, na-eso Denmar ...
Nnwale antigen nke COVID-19 nke ụlọ ọrụ China merie "Grand Slam" nke mba 15 gụnyere Germany, France, Italy na Portugal n'otu nzọụkwụ! Ka ọ dị ugbu a, n'ihi mgbasa nke nje virus na ihe ndị ọzọ, ọrịa ọrịa COIVD-19 n'ọtụtụ mba Europe eweghachila ...
NEWGENE Novel Coronavirus Antigen nchọpụta ngwaahịa nwetara akwụkwọ akụkọ TV pụrụ iche na onye mgbasa ozi obodo Spanish bụ Antena3. NEWGENE ngwaahịa na-enweta nnukwu ewu ewu ma bụrụ ndị a maara ebe niile na arụmọrụ ya na nkwonkwo ya ...
Ma dabere na mma magburu onwe ya, ezi uche price, kacha mma ọrụ, anyị nwetara ezi nzaghachi si ahịa esenidụt. Na ọtụtụ afọ ezi ọrụ na mmepe, anyị nwere otu ọkachamara ahịa ahịa mba ofesi.
Anyị na-elekwasị anya na nkọwa niile maka nhazi ahịa maka ndị ahịa ruo mgbe ha nwetara ngwaahịa dị mma ma dị mma yana ọrụ lọjistik dị mma na ọnụ ahịa akụ na ụba.